” ဘo …စိတ်ကူး “ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » ” ဘo …စိတ်ကူး “	12
” ဘo …စိတ်ကူး “
Posted by may july on Jul 6, 2012 in Creative Writing | 12 comments
ဘ၀ ..စိတ်ကူး ..
ပြုံးပွင့်ဝေတဲ့ နေ့တွေ မရှိတော့ဘူးလား…
ပျော်ရွင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ မရှိတော့ဘူးလား…
မင်းအတွက် ငါ့မှာတော့ မကုန်ဆုံးတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို
အစဉ်အတိုင်း ချမှတ်ထားဆဲပါ ချစ်သူရယ်…
ငါ့နှလုံးသားကိုလဲ ပြန်ရှင်သန်ခွင့်လေး ပေးခဲ့ပါကွယ်…
အချိန်တိုင်းကို မင်းနဲ့အတူ ကုန်ဆုံးချင်ပါတယ်…
ဒီကဗျာလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကရေးထားတဲ့ကဗျာလေးပါ..
ခုတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့နော် … :P
may july has written 8 post in this blog.
View all posts by may july →	Blog
mayjuly says: စာဖတ်သူတွေ အတွက် အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိပေမယ့် …
စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်နေလို့ …..
တစ်ခုခုလုပ်လိုက်မိတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ပေးပါရှင် …
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: May …ရဲ့ခံစားချက်တွေလား…
May …ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တော့….
ဘာတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့်….
manawphyulay says: ညီမလေးရေ.. သေသူတွေတော့ အသက်မသွင်းပါနဲ့။ လူဦးရေတွေ များပြားပြီး လူနေမှု ထူထပ်လာမှာမို့လို့ပါနော်။ :P
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: တဘောကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က နှလုံးသေနေတယ်..
ဒီတစ်နှစ်တော့ နှလုံးရှင်နေပြီ ဆိုတဲ့ဒဘော..ပေါ့နော်.၀ုတ်ခဲ့..၀ုတ်ခဲ့..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1047
mayjuly says: မိုက်လေးရေ..
လူတစ်ကိုယ်စိတ်တမျိုးပေါ့ကွယ် …စိတ်တွေတူနေရင် ဖြစ်ဘူးထင်တယ်နော …
မမ ရေ …
အသက်သွင်းလို့မရရင်တော့ နှလုံးသားလေးတော့ ဘ၀ဆုံးပီနော်..(ဟိဟိ နောက်ထှာနော်)
အဲ ဒဘော အဲ ဒဘော :D
maung khinmin says: ရှင်သန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီကွယ်
၀မ်းတွင်းရူး says: အသက်သွင်းပေးချင်၏။ဟီးးးးး
နောက်တာနော် စိတ်မဆိုးနဲ့ 
snow white says: အချိန်တိုင်းတော့ မင်းနဲ့အတူမနေပါနဲ့ မေလေးရယ် အလုပ်လည်းလုပ်ပါအုံးနော် ဟီးးးးးးးးးးးးးဒီနေ့ကစပြီး မေလေးလို့ခေါ်မယ်နော် ချစ်စနိုးလေးနဲ့ပေါ့
မောင်ပေ says: ဂျူလိုင့်ရဲ့ ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ နှလုံးသားရဲ့ ချစ်ခြင်းအားလုံးကို
ဇောက် ထိုး says: ကျားသေးကိုတော့ အသက်သွင်းလို့ရတယ်လို့ကြားဖူးတယ်နော်….
ရှင်းသန့် နွယ် says: ဖတ်သွားတယ်နော်
mayjuly says: maung khinmin ရေ..
ကျေးဇူးပါနော် ရှင်သန်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်.. :P
ကိုဝမ်းတွင်းရူး..ချင့် နာမယ်က တညိုးပဲနော် …
အသက်သွင်းပေးနဲ့တော့ လေ .. ရှင်သွားပါပီလို့ ဦးပေ ခင်ည ..
နှလုံးတားလေးကိုတော့ သိမ်းလို့ရပါတယ်..လူတော့ပါဘူးပေါ့နော် … :D
snow white လေးရေ …
အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာအချိန်တိုင်း ရှိနေလို့ရတယ်နော် … (ဒီလိုလည်းရသကွယ်…)
ကိုဇောက် ထိုး ရှင့်….
ကျားသေးကိုဘယ်လိုများအသက်သွင်းရပါသလဲ သိချင်လိုက်တာ .. P
ရှင်းသန့် နွယ် …
ညီမရေ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်…
Comments By Postစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - BMTM Mdy - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - padonmar - အရီးခင်လတ်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Nay Chi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - BMTM Mdy - ရာမညဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAခရီးသည်လေးသို့ - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - padonmarပုညကြိယာဆယ်ပါး - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစည်တော်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မောင် ပေမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - BMTM Mdy - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - cobra“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်အတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်လုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities